Sakoroka teny Ankatso sy teny Ambohipo: nidina an-dalambe ny mpianatra, raikitra ny tora-bato sy ny lakrimozena | NewsMada
Sakoroka teny Ankatso sy teny Ambohipo: nidina an-dalambe ny mpianatra, raikitra ny tora-bato sy ny lakrimozena
Par Taratra sur 18/12/2019
Ny tsy mbola fivahan’ny olana (fahatarana matetika amin’ny fandoavana ny vatsim-pianarana, fotodrafitrasa simba, fahatapahan’ny jiro sy ny rano, famahana ny olan’ny Seces…). Ireo no nahatonga ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso sy teny Ambohipo, omaly. Nisy ny fidinana an-dalambe, ny fandoroana kodiarana, ny tora-bato sy ny toraka lakrimozena nataon’ny mpitandro filaminana.
Nipoaka ny lakrimozena, nodorana ny kodiarana, raikitra ny tora-bato teny Ankatso, omaly, nandritra ny hetsiky ny mpianatra teny. Vokany, olona roa voasambotra tamin’izany. Manodidina ny tamin’ny 9 ora sy sasany maraina, nanomboka nifamory teny an-dalambe ireo mpianatra ka nampaneno ny kiririoka. Nobahanan’izy ireo ny lalana miditra ao amin’ny Campus Universitaire tamin’ny alalan’ny fandorana kodiarana. Telo, hoy ireo mpianatra, ny fitakiana ataonay, antony hanaovanay izao hetsika izao.“Mitaky izahay ny fiverenan’ny fampianarana. Efa telo volana izahay tsy nianatra noho ny mpampianatra tsy manaiky hampianatra. Mitaky ihany koa izahay ny hamoahanana ara-potoana ny vatsim-pianarana; mitaky ihany koa ny famerenana ny “mini-mémoire” dia ny licence, nofoanan’ny ministeran’ny Fampianarana ambony”, hoy ny solontenan’ny mpianatra, omaly. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy hitsahatra ny hetsika raha tsy voavaly ny olana eny amin’ny oniversite. Fantatra tamin’izany fa ny efa-bolana voalohan’ny taom-pianarana ihany no nianatra ireo mpianatra ary niato tanteraka izany ankehitriny. Vokany, nanome 72 ora ny fanjakana izy ireo amin’ny famahana ny olana, ny zoma lasa teo, anton’ny hetsika omaly iny. Tonga teny an-toerana anefa ireo mpitandro filaminana niezaka nanaparitaka ireo mpianatra, vokany mpianatra iray voasambotra tamin’izany ary mpitandro filaminana iray hafa naratra.
Sakoroka teny Ambohipo
Nihetsika ihany koa ireo mpianatra mipetraka eny amin’ny cité Ambohipo. Nitaky izy ireo ny fijerena ny fotodrafitrasa izay efa simba. “Fanimbana ny hoavin’ireo mpianatra malagasy no atao. Simba ny fotodrafitrasa ipetrahanay. Ny fampianarana, tsy mandeha amin’ny laoniny. Tsy hijanona izay raha tsy voavaha ny olanay”, hoy izy ireo tamin’izany. Tsy ekena, hoy izy ireo, ny finiavana tsy hijerena ny olana misy ety amin’ny citén’ny mpianatra, indrindra ny jiro sy ny rano. Tsy manaiky ihany koa izy ireo ny amin’ny fizarana tsy mitovy ny trano fipetrahan’ny mpianatra. Voatsindry tamin’izany ny fampisaratsarahana ny mpianatra, indrindra ny enti-manana hiatrehana ny rafitra LMD toy ny “connexion internet”. Nidina teny an-toerana ireo mpitandro filaminana ary niezaka nanaparitaka ny fitokonana. Vokany, olona iray voasambotra.
Vatsim-pianarana mialoha ny faran’ny taona
Manoloana ireo hetsiky ny mpianatra omaly, nanambara ny Praiminisitra Ntsay Christian fa aloa mialoha ny faran’ny taona ny vatsim-pianaran’ireo mpianatra rehetra manerana ny oniversite.
“Hefaina mialoha ny faran’ny taona izao ny vatsim-pianaran’ireo mpianatra ary hitadiavana vahaolana ny fampianarana”, hoy ny praiminisitra, omaly. Fantatra tamin’izany fa sambany tao anatin’ny 10 taona no afaka handoa vatsim-pianarana iray manontolo ny fanjakana.